1 MPANJAKA 22.1-12 F.2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 MPANJAKA 22.1-12 F.2
FIJERY TSY MITOVY!
Fiaraha-miasa (1-4). Samy taranak’i Jakoba na ny firenen’i Joda na ny firenen’Isiraely fa nosarahin’ny Tompo noho ny tsy nankatoavan’i Rehoboama zanak’i Solomona ny fangatahan’ny vahoaka (1 Mpanjaka 12). Lasa firenena roa samy nanana ny fanjakany sy ny mpanjakany. Hitantsika eto fa Josafata mpanjakan’ny Joda no nanatona ary nanararaotra izany ny mpanjakan’Isiraely mba hiaraka hamerina an’i Ramota Gileada. Tsara ny fiaraha-miasa sy ny fifanampiana saingy mila mitovy fanahy sy fijery mba tsy hisian’ny fifanoheran’ny Fanahy miasa.
Zava-dehibe ny fanontaniana ny Tompo rehefa hanao zavatra (5-9). Miavaka ny olona iasan’ny Fanahin’Andriamanitra rehefa hanao zavatra. Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena na saina fa miankina amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Izany no antoky ny fahombiazana amin’izay atao rehetra. Manana ny mpaminaniny i Ahaba saingy tsy naharesy lahatra an’i Josafata izay nanana fifandraisana tamin’Andriamanitra ny hionona amin’izay lazain’ireo. Mba sahy hijoro toy izany ve ianao manoloana ny zavatra hitanao hoe tsy mety na tsy rariny? Mahay mamantatra ny fanahy manodidina anao ve ianao ka sahy manohitra izay tsy avy amin’ny Tompo sa matin-kena-maso ka manaiky lembenana amin’ny ataon’ny fanahy tsy izy? Fotoana fanavahana ny tena izy sy ny sandoka izao. Ny Fanahy Masina ihany no afaka manampy amin’izany.
Mitovy ny ambaran’ny fanahy mitovy (10-12). Ny mpaminanin’i Ahaba no manodidina ny mpanjaka roalahy. Raha ny fombafomba dia toa hilaza ny tena izy izy ireo ary dia nilaza ny fahombiazan’ny dia avokoa, fanahy mitovy ka nitovy ny filaza teto na nanara-kefa ny sasany. Mila mitandrina isika fa mahay mamitaka ny fanahy ratsy an!